Maadeey oo Xaaladiisa Caafimaad Aad Looga Dayrinayo – Rasaasa News
Nov 7, 2009 Dolal, Jwxo, Ogaden
Kibistii laguu qoray walaan kumi ku dhaafayn, kursi kaad ku kaaydeena waa kii dad kuu xigay, karkaarkaad ka tuurtaan ogaa kii ku aaminaye, kudku in uu ku dili oon Eebahay kaaba kicin doonin iyo in aad kadeedkaa ku jiri waa kalma Ilaahe, kalyayeelo kii aad dishaa aakharuu kugu sugaayeye.
warar naga soo gaadhay London ayaa waxay xaqiijinayaan in Maadeey uu aad u ildaran yahay, lana ildaran yahay xanuun beerka ah oo dhawr goor hore looga daweeyey, kaas oo ah cagaarshow[hyptitus]. Waxaa baryahanba ku soo kordhay barar qariyey oogadiisa oo dhan oo codkiisana xidhay, wuxuu waa dhawayd dawayn u aaday dalka Maraykanka magaalada New York, halkaas oo ay dhakhaatiirtu dawooyin kala duwan oo dhinaca beerka ah siiyeen.
Xanuunk haya Maadey, kolkii ugu horeysay waxaa laggaga daweeyey dalka Ingriiska isaga oo xiligaas booqasho ku joogay halkaas sanadkii 1994, dhawr goor oo ka dambaysayna isla dalkaas oo uu haysto deganaanshihiisa ayaa lagaga daweeyey. Cudurka cagaarshowga oo ka mid ah cudurada ugu xun ee dila dadka Afrika, ayaa waxaa keenta fayraskiisa Kaneecada ama dhalmaayada. Dalalka galbeedka waxaa cudurkan si weyn loogaga hortagaa talaalo la siiyo dadka inta uusan ku dhicin, waxana uu lee yahay cudurkani saddex nooc saddexda nooc mid ka mid ah ayaan dawo lahaynba oo dila ruuxa uu ku dhaco.
Sida ay wararku sheegayaan, Maadey waxaa hayey kolkii hore barar weyn oo jidhkiisa oo dhan buuxiyey iyo xabeeb ay adag tahay in uu si wanaagsan u hadlo, hada waxaa ahaya ayey wararku sheegayaan xanuun uusan hadli karin oo ay neeftu ku dhagayso mamarka qaarkood, inta badan waxaa uu ku fadhiyaa ayaa la yidhi kursi dheer, kaas oo uu habeenkiina ku seexdo.
Dhimashada, Caafimaadka iyo Xanuunkaba waxaa leh oo ay u sugnaatay Eebaha weyn. Hadii uu ruux xanuun ku yimaado ama ay dhibaato kale ku timaado, dadka qaarkood waa loo duceeyaa lana xusuustaa dabeecadihii wanwanaagsanaa ee uu ruuxaasi lahaa, qaarkoodna waxaa dib loo xusuustaa falal xun xun oo ay gaystay.
Maadeey iyo saddex nin oo kale waxay dadweynaha Somalida Ogadeeniya aad ugu xasuustaan dhibaatooyinka ay u gaysteen halganka ay waday Jwxo, waxaa kale oo aad loogu xasuustaa dilkii dhagarta ahaa ee ay u gaysteen saaxiibkoodii halganka Dr. Dolal, gaar ahaan waxaa Maadeey aad loogu xasuusan, hadii uu dhinto iyo hadii uu nool yahayba Abaal ka dhicii iyo aamin daradii uu lahaa.
Waxay dad badan oo Somalida Ogadeeniya ah ka dhagaysteen codkiisa isaga oo u dhaaranay Dr. Dolal, maalmo dabadeedna la dilay codadkaas oo aad ka dhagaysan kartaan Halkan.